Kadib Heshiiska Hordhaca Ee David Alaba La Gaaray Real Madrid, Maxaa Kala Socotaa Sadex Boos Uu Ka Xalinayo
Home Horyaalka Spain Kadib Heshiiska hordhaca ee David Alaba la gaaray Real Madrid, Maxaa kala...
David Alaba ayaa la sheegay inuu heshiis hordhac ah la gaadhay kooxda reer Spain ee Real Madrid oo uu si bilaash ah ugu soo wareegi doono xagaaga, marka uu dhamaado qandaraaskiisa Bayern Munich.
Tababare Zinedine Zidane ayaa rumaysan in Alaba oo yimaadda uu xubin muhiim ah ka noqon doono safkiisa, isla markaana uu uga ciyaari doono dhawr maalmood oo ay hadda ka dhibaataysan tahay kooxdiisu, iyadoo uu si dhab ah u xallin doono mushkilad ka taagan saddex boos.
Alaba ayaa ka ciyaari kara difaaca bidix, difaaca dhexe iyo khadka dhexe ee difaaca caawisa, waxaanay saddexdan meelood yihiin yihiin kuwo ay Real Madrid diciif ka tahay.
Dhibaatada difaaca bidix
Marcelo oo taariikh ku sameeyey Real Madrid ayaa hoos u dhac ku yimid, waxaana uu hadda kaydka ugu jiraa Ferland Mendy oo tayo ahaan ka hooseeya heerkii ay Los Blancos ka doonaysay ciyaartoyda dhinacyada difaaca oo qayb ka noqon jiray hal-abuureyaasha iyo caawiyeyaasha goolasha, iyadoo marka ay kooxdu goolal u baahan tahayna ay noqon jireen fureyaasha.
Marcelo oo ay da’diisu tahay 33 jir, waxa ku dhacay isbeddel badan, ciyaartiisuna waxay kasoo degtay heerkii wanaagsanaa.
Alaba oo booskan ka ciyaara, waxa uu ka wanaagsanaan doonaa Ferland Mendy difaac ahaan, weerar ahaan iyo kubbad qaybinta intaba, iyadoo uu waliba ku daro gool-dhalin.
Alaba oo ka ciyaara difaaca dhexe
Iyadoo mustaqbalka Sergio Ramos aanu sugnayn, Alaba ayaa u muuqda inuu noqonayo difaac tayadiisu sarrayso oo beddeli karaya ruug-caddaaga reer Spain, iyadoo uu ka garab ciyaari doono Raphael Varane, taas oo noqon karta waqti kala-guur oo la filayo inuu dhacayo.
24 kulan oo Alaba uu u saftay Bayern Munich xili ciyaareedkan, waxa 21 ka mid ah uu ka ciyaaray difaaca dhexe, sidaas darteed Zinedine Zidane waxa uu ka heli doonaa wixii uu ka doonayay Ramos oo kaele, mana aha siyaasad xun inay sii raadiyaan laacibkii u beddelayay Ramos oo hadda ay da’diisu afka la gashay 35 jir.
Haddii Sergio Ramos uu saxeexo heshiis oo uu sii joogo Real Madrid, Alaba waxa uu kaydka u diri karaa Raphael Varane oo marar badan qaladaad sameeya, isagoo ka garab ciyaari kara Ramos.
Inkasta oo Zidane uu taageere weyn u yahay Varane, layaab ayay noqon doontaa in la arko Alaba oo kaydka geliyey difaaca reer France, si la mid ah Marcelo oo mar kaliya boos la’aani ku dhacday.
Alaba oo ka ciyaara khadka dhexe ee difaaca xigta
Casemiro ayaa No.6 u noqday Real Madrid, booskaasna iska yeeshay tan iyo sannadkii 2015kii, mana jirto wax tilmaan ah oo muujin karta in Alaba uu booskiisa ku cidhiidhyi karayo, laakiin waxa uu laacibka reer Austria u noqon doonaa beddel wanaagsan iyo kala-doorasho, iyadoo marka uu laacibkani dhaawacmo, ama daallan yahay ama ganaax ku dhaco uu u noqon doono mid sii buuxiya booska.
Hore waxa beddel ugu ahaa Casemiro laacibka reer Spain ee Marcos Llorente oo uga wareegay Atletico Madrid.
Khibradda Alaba ee khadka dhexe, waxa inta badan lagu arkaa xulka qarankiisa Austria oo uu uga ciyaaro halkaas, waxaana la arkaa isagoo saamayn badan ku leh garoomada, laakiin Bayern Munich ama Real Madrid lagama filayo inuu fursado waaweyn ka helo khadka dhexe, sababtoo ah waxa jooga ciyaartooyo dabiiciyan ay ciyaartoodu tahay khadka dhexe.
Si kastaba, Zinedine Zidane ayaa rajaynaya inuu helo Alaba, si uu uga xalliyo dhawr dhibaato oo ay ka mid yihiin saddexdan aynu sare kusoo xusnay.
Previous articleRiyooyinkii Hazard oo dhaawac ku dheelay.
Next articleKooxda Manchester United Oo UEFA U Gudbisay Liiska Xiddigaha U Ciyaari Doona Tartanka Europa League